राष्ट्रब्यापी साकेला सिली प्रतियोगिता साकेला गाउँपालिका प्रथम «
राष्ट्रब्यापी साकेला सिली प्रतियोगिता साकेला गाउँपालिका प्रथम
प्रकाशित मिति : १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १४:५०
खोटाङमा सम्पन्न राष्ट्रब्यापी साकेला सिली प्रतियोगितामा जिल्लाकै साकेला गाउँपालिका–२ रतन्छाले प्रथम स्थान ओगटेको छ । मंगलबार सम्पन्न सिली प्रतियोगितामा बिभिन्न जिल्ला तथा जिल्ला वाहिरबाट सहभागी २० समुहलाई पछि पार्दै उक्त समुह प्रथम बनेको हो ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–७ दोर्पाचिउरीडाँडामा सोमबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा सोही नगरपालिका–३ बाम्राङ दोश्रो, वडा नम्बर–६ नेर्पा तेश्रो र वडा नम्बर–११ खार्मीले सान्तवना स्थान लिएको छ । किरात राई यायोक्खा प्रारम्भिक कमिटि दोर्पाले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा प्रथम समुहले नगद १ लाख रुपैंयाँका साथमा ट्रफी र प्रमाण प्राप्त गरेको छ । यस्तै, दोश्रोले ७५ हजार, तेश्रोले ५० हजार र सान्तवना हुने समुहले २५ हजार रुपैंयाँका साथमा ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । बिजेतालाई बिशेष प्रकारले निर्माण गरिएको चिण्डो समेत प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएका छन् ।
विजयी समुहलाई प्रदेश सभा सदस्य रामकुमार राई (पासाङ)ले पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको संयोजक सिताराम राईले बताउनुभयो । ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रब्यापी प्रतियोगिता सफल बनाउन देशविदेशमा रहेको जिल्लाबासी उपस्थित भएका थिए । प्रतियोगिताको उद्घाटनमा प्रदेश सभा सदस्य उषाकला राई, पूर्व सांसद लगायत जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिती थियो ।
उद्घाटनका दिन विप्लव समुहका बन्दका कारण टुंगो लागेको कतिपय सिली समुह सहभागी हुन नसकेको आयोजकले जनाएका छन् । किरात राईको प्रमुख चाड साकेलामा नाचिने साकेला सिली लोपोन्मुख बन्दै गएकाले सिलीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको बताईएको छ ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार जीतेन राई, उमेश राई(फुलन्देको आमा), गायक रेवत राई, गायक तथा संगीतकार पदम थुलुङ राई लगायतले आफ्ना प्रस्तुति दिएका थिए ।
यो पनि पढ्नुस …..! राष्ट्रिय स्तरको साकेला सिली प्रतियोगिताको तयारी पूरा, २३ समुह सहभागी
माझकिरातका नामले परिचित खोटाङमा आयोजना हुन लागेको राष्ट्रिय स्तरको साकेला सिली प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ । किरात राई समुदायको घनाबस्ती रहेको जिल्लास्थित दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–७ दोर्पाचिउरीडाँडामा यही १३ र १४ गते हुने ऐतिहासिक प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको हो ।
किरात राई यायोक्खा प्रारम्भिक कमिटि दोर्पाले आयोजना गरेको साकेला सिली प्रतियोगिताका लागि आर्थिक तथा भौतिक ब्यवस्थापकीय तयारी पूरा गरिएको संयोजक सिताराम राईले बताउनुभयो । प्रतियोगिताको सहभागी समुह तथा साँस्कृतिक कलाकार टोली ब्यवस्थापन, मञ्च ब्यवस्थापन, समय ब्यवस्थापन, स्वयमसेवक ब्यवस्थापन लगायतका तयारी गरिएकोे संयोजक राईको भनाई छ ।
दोर्पा चिउरीडाँडामा आयोजना हुने प्रतियोगितमा उदयपुरको दुई समुह, भोजपुर तथा मोरङका एक–एक समुहले सहभागिता जनाउनेछन् । उक्त जिल्ला बाहेक खोटाङका १९ समुह गरी जम्मा २३ समुहले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने आयोजकले जनाएका छन् ।
किरात राईको प्रमुख चाड साकेलामा नाचिने साकेला सिली लोपोन्मुख बन्दै गएकाले सिलीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि आयोजना गर्न लागिएको आयोजकको भनई छ । साकेला सिली नाच प्रतियोगीताका प्रथम, दोश्रो र तेश्रो हुने समुहलाई क्रमशः नगद १ लाख, ७५ हजार र ५० हजार रुपैंयाँका साथमा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ । बिजेतालाई मुर्तिकार रोजन राईले निर्माण गर्नुभएको बिशेष प्रकारको वावु(चिण्डो) समेत प्रदान गरिने जनाईएको छ ।
हाल जिल्लाबासी किरात तथा गैरकिरात सबैको मन उक्त कार्यक्रमतिर मोडिएको पाईएको छ ।
गोर्खाल्याण्डका मु’द्दाहरुमा केन्द्रित ‘ओ दार्जिलिङ’ बजारमा
दार्जिलिङका सुपरिचित लेखक एवम् प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामाले लेखेको पुस्तक ‘ओ दार्जीलिङ ! सीमा वारिपारिका